Raw Testosterone isocaproate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Testosterone Isocaproate Powder ishomoni inowanikwa zvikuru muzviedzo zvevarume. Ndiyo hormone inotarisirwa kupa varume varume tsika dzavo dzepabonde. Transdermal testosterone mimics muviri wepanyama rhythmic kubudiswa kwe testosterone kuburikidza neka-release release. Testosterone Isocaproate powder inoshandiswa kugadzirisa urombo hwe testosterone hwakadai se hypo hypoadism uye kusagadzikana kwepabonde nemagumisiro asina kukwana.
Raw Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) video
Raw Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) Tsanangudzo
Isocaproate, haisi steroid anabolic asi ester inogona kuiswa kune steroid nenzira imwecheteyo seyakakurumbira Cypionate kana Enanthate esters. Kufanana neCypionate uye Enanthate, Isocaproate inogonawo kuiswa kune testosterone hormone, asi pane Isocaproate izvi zvinowanzova nzvimbo chete yatinoona ichibatanidzwa. Testosterone-Isocaproate, imwe fomu ester isinganzwiki; kana iwe ukaiwana ipapo zvaive zvingangoita urongwa hunokosha, uye hapana chaicho chikonzero chekuzoda Testosterone-Isocaproate mune iyi fomu ester imwe chete. Kwatingawana iestroate ester kazhinji uye iyo inobatsira zvikuru mu testosterone mitsva; kunyanya Omnadren uye Sustanon-250. Omnadren uye Sustanon-250 zvose zvose testosterone zvinokonzerwa neeseri ina dzakabatanidzwa; zvina zvakasiyana-siyana muhukuru zvakasiyana esters zvinoumba imwechete testosterone makundi. Nokuda kwezvinangwa zvose zvakasimba, idzi makemikari maviri anenge akafanana; chimiro chavo chose chinenge chakangofanana nekusiyana kweester, uye saizvozvo zvakadaro zvinogona kuwanikwa. Kuumbwa kweumwe neumwe kune zvakadai:
Raw Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) Specifications
Product Name Raw Testosterone isocaproate powder
Kemikari Name Testosterone isocaproate;
Testosterone isocapronate; UNII-X8ST05GYDM; CHEBI: 35001; X8ST05GYDM
Molecular Wsere 386.576 g / mol
Monoisotopic Mass 386.282 g / mol
Formula Weight 386.6
chengetedzo -20 ° C
Kuramba ≥ makore 2
Chii chakakosha Testosterone isocaproate powder (15262-86-9)?
An anabolic androgenic steroid uye ester form of testosterone; ane hafu yeupenyu hurefu kupfuura unmodified testosterone
Testosterone isocaproate powder is analytical reference standard categorized as an anabolic androgenic steroid inogona kuonekwa muropa. Icho chinonzi ester ye androgen chaiyo inoitika, testosterone ine nguva yakareba yeupenyu. Mafungiro ane testosterone isocaproate ave akaedzwa kushandiswa mu hypogonadism uye anononoka kutanga kutanga. Anabolic steroids, kusanganisira testosterone isocaproate powder, yakashandiswa kusimbisa hutano hwemakwikwi nemakwikwi. Ichi chigadzirwa chinogadzirirwa kutsvakurudza uye mapurisa ekuongorora.
Iyo yakakura sei Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) mabasa
Testosterone isocaproate yakasungwa ne fatty acid kana ester inokonzera kucheswa pakusunungurwa mumuviri. Iine hupenyu hunoshingaira hunoreva kuti huchagara mumutumbi kwenguva yakareba uye saka kuitora nenzira yejojo ​​kamwechete kana mairi kaviri pavhiki mune zvakakwana.
Testosterone isocaproate powder yakafanana neTesttosteron Caproate. Iine nhamba yakafanana ye hydrogens, carboni, okisijeni uyechete yemasikisi inorema asi hupenyu hunoita humwe humwe humwe hunoenzaniswa neTesttosteron Caproate.
Raw Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) Dosage
Testosterone Isocaproate Powder inogona kutorwa nenzira yejojo.
Kwevatangi vemutengo inorudzirwa kuva 250 mg / vhiki inogona kutorwa kamwe kana kaviri muvhiki.
Kune vashandi vekugadzira muviri miviri inogona kuwedzerwa kusvika ku 1000 mg pavhiki zvakare.
Raw Testosterone isocaproate powder (15262-86-9) zvinobatsira
Zvikomborero zveTesttosterone Isocaproate powder based compounds like Omnadren uye Sustanon-250 inogona kuputsika kusvika mumapoka maviri akazara; zvikomborero zvinowanikwa nemitemo iri pamusoro uye kuti rudzi urwu rwemakemikari runopa mukuenzanisa kune imwe fomu ester. Sezvakakurukurwa kutanga, kubatsirwa kwekusanganiswa kwe testosterone kugovera zvakanakisa zvepasi rose nepfungwa huru uye yakakura ester, uye izvi zvinopa zvose zvinokurumidza kuita testosterone ine nguva yakareba inoguma muhuwandu hwehuwandu hwenguva. Izvozvo zvinogona kunge zvisinganzwisisiki nyore, asi hapana chaicho chaicho kune icho kupfuura icho. Zvadaro tine zvikomborero chaizvoizvo zvinoenderana nemitemo iri pamusoro, uye seOnnadren uye Sustanon-250 inenge yakanyatsoshandiswa mukushanda isu tiri kungotarisa pane zvinobatsira mune izvozvi.
Kune mutambi wacho wemwaka-kunze, munhu anotarisa kuwedzera huwandu hwakawanda hwehuta hwakaoma uye simba, mafomu eIsocaproate anosarudza zvakakwana sezvaanoita zvikuru kukurudzira migumo miviri. Uyezve, nekuwedzera kwemaitiro emhepo, iwe zvino unokwanisa kuwana huwandu hunoonda uye huwandu huzhinji hune mafuta, uye izvozvo zvinokosha. Zvechokwadi, mishonga imwechete inogona kushandiswa pakucheka zvakare; mushure mezvose, kusimbiswa kwemetabolism kunowedzera kuwedzera mafuta-kupisa simba, uye sekuti testosterone imhando dzakashata dzakachengetedza dzichengetedze kungosarudza zvakanakisisa kune chero chirongwa chekucheka.
Kana izvo zvisina kukwana, pasinei nechinangwa chako chekushandisa idzi Isocaproate based testosterone mazana achawedzera musimba wako kutsungirira; ivo vachawedzera huwandu hwehuwandu hwekudzoka uye kunyange kukupa iwe humwe simba. Iwe haunganeta nekukurumidza, iwe uchaporesa uye muviri wako uchagadzirisa nekukurumidza uye kuwedzerwa kwehuwandu, uye kana izvozvo hazvisi kubudirira kushanda hapana. Munzira dzakawanda, testosterone steroid imwe yezvinhu zviri nyore kunzwisisa, chimwe chezvinhu zvakajeka pane zvose, asi kana zvingave zviri nyore hazvikoshi uye zvichida zvakanakisisa anabolic androgenic steroid yenguva dzose. Uyezve, kana zvasvika kune munhu mukuru ane hutano hwakanaka, ihwowo ndewimwe yakanyatsorambidzwa, uye hakuna chimwe chinhu chinokosha kupfuura icho.
Tenga Testosterone isocaproate powder kubva kuBuasas.com
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8)